သံလိုက် Stripe ဟာကတ်နှင့် RFID Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, သံလိုက် Stripe ဟာကတ်နှင့် RFID Card ကို Multi-function ကို Reader ကို
 » hardware » သံလိုက် Stripe ဟာကတ်စက်ပစ္စည်း
သံလိုက် Stripe ဟာကတ်နှင့် RFID Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, multi-function ကိုကတ် Reader ကို
သံလိုက် Stripe ဟာကတ်စက်ပစ္စည်း သံလိုက် Stripe ဟာကတ်နှင့် RFID Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, သံလိုက် Stripe ဟာကတ်နှင့် RFID Card ကို Multi-function ကို Reader ကို
USB port ကို, နှစ်ဦးစလုံးသံလိုက်အစင်းကဒ်ကိုဖတ်, အဖတ် RFID ကဒ် function ကို.
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: USB က power supply
ယခု: 45~ 65mA
ဆက်သွယ်ရေး: USB ကြိုး
အရွယ်: L ကို 100mm X ကို W က 34mm x ကို H ကို 30mm
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 55 ℃
အလုပ်လုပ်စိုထိုင်းဆ: 10%~ 90% ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -30℃ ~ + 70 ℃
Store ကိုစိုထိုင်းဆ: 10%~ 90% ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ
Card ကိုဖတ်ပြီးသား: 1/2/3 optional ကိုခြေရာခံ
သံလိုက်ခေါင်းကိုဘဝ: အကွောငျး 500000 ကြိမ်
ဒေတာကိုအတည်ပြု: built-in ဉသြသံ, အမှားညွှန်ပြချက်ဖတ်နေ
Card ကိုစံ compatibility: ISO ကို 7811, ပြီးနောက်, CADMV
စမတ်ကဒ် interface ကို: ISO14443-တစ်ဦးက, NXP Mifare နှင့်သဟဇာတ chip ကို
induction အကွာအဝေး: အကြောင်းကို 15mm
ဉသြသံ:်/ ပိတ်သည် Programmable ထိန်းချုပ်မှုဉသြသံ
RFID ကဒ် compatibility: ISO ကို 14443A, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, Mifare က Ultra အလင်း, Mifare Desfire, Mifare Plus အား
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Windows 7, Windows2008, WindowsVista, Windows2003, Windows2000, WindowsXP, Linux ကို
ကို C-MR-100T သံလိုက်အစင်းကဒ်နှင့် RFID ကဒ်2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, က Multi-function ကိုကဒ်စာဖတ်သူကိုဖြစ်ပါသည်, သံလိုက်အစင်းကဒ်စာဖတ်သူကိုနှင့်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကဒ်စာဖတ်သူကို function ကိုတစ်ဦးစုဆောင်းမှု. သငျသညျသံလိုက်အစင်းကဒ်ကိုဖတ်နှင့် / ရေး RFID ကဒ်ကိုဖတ်ရှုဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်, USB က interface ကို PC မှာစက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူကွန်နက်ရှင်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်.
ကို C-MR-100T သံလိုက်အစင်းကဒ် Reader ကိုထောက်ခံမှု Two-လမ်းပွတ်ဆွဲကဒ်, ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ, သံလိုက်အစင်းကဒ်ဖတ်နိုင် 1, 2,3လမ်းကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, အပြည့်အဝ ANSL / က ISO စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်. RFID reader ကိုထောက်ခံမှု NXP Mifare 1k chip ကိုကဒ်စစ်ဆင်ရေး, လုံခြုံမှုပြဿနာကတ်များနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးလယ်ကွင်းအများစု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်.
ကို C-MR-100T ကျယ်ပြန့်သည့်တက်ရောက်သူများတွင်အသုံးပြု, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, လမ်းနှင့်တံတားသေဆုံးသူ, ဓာတ်ငွေ့ / ရေနံဘူတာ, ကားတစ်စီးဥယျာဉ်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အဖိုးအခများဆေးပညာဆိုင်ရာအပေါင်းတို့နှင့်မျိုး, သိမ်းဆည်းထားတန်ဖိုးကို, ထိုကဲ့သို့သောစမတ်ကဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအဖြစ်မေးမြန်းမှု applications များ, အလွယ်တကူသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အပလီကေးရှင်းဖို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို testn အပေါ် boot, အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်း power supply
USB မှတ်အင်တာဖေ့စ, စစ်မှန်တဲ့ plug ကိုများနှင့်ပြဇာတ်, ထို့ပြင်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး
သံလိုက်ကဒ်ကိုဖတ်ပါနှင့် / ရေးသော induction ကဒ် function ကိုဖတ်ပါ
အားလုံး Read 1,2,3 သံလိုက်ကဒ်ကိုခြေရာခံ, ထောက်ခံမှု Two-လမ်းပွတ်ဆွဲကဒ်
သံလိုက်ကဒ် 1, 2,3လမ်းကြောင်းရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်
Built-in data တွေကိုစာဝှက်စနစ် options များ: သုံးဆ DES ဟာ, အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး features
ထိုကဲ့သို့သောက ISO အဖြစ် compatibility, AAMVA, CADMV စံချိန်စံညွှန်းများ
ပံ့ပိုးမှု NXP Mifare 1k chip ကိုကဒ်. အကြောင်းကို 15mm ၏ induction အကွာအဝေး
ပြီးပြည့်စုံသောပြောင်းလဲနေသောစာကြည့်တိုက် function ကိုပေး, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအနက်ပေး, သော့ချက်အချက်များ, ဥပမာ, နှင့်အမျိုးမျိုးသောဖှံ့ဖွိုးတိုးတဘာသာစကားဥပမာ source code ကို (အပါအဝင်: ကို C # 2003, C ++ တို့ဆောက်, Adelphi, Powerbuilder, VB.net2003, VB6.0, java)
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်သံလိုက် Stripe ဟာကတ်နှင့် RFID Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, multi-function ကိုကတ် Reader ကို
prev: သံလိုက် Stripe ဟာ Card ကို, IC Card ကို, PSAM Card ကို, M1 Card ကို4တွင် 1 စာဖတ်သူကို
နောက်တစ်ခု: သံလိုက် Stripe ဟာ Card ကို & IC Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို
C-YD429 Magnetic Stripe Card Reader သည် SDK Software နှင့်ဆက်သွယ်ရန် EMV Card CPU Card ကိုပံ့ပိုးသည်
အသေးငယ်ဆုံးအနည်းဆုံးသံလိုက် Stripe ဟာကတ် Reader ကို, Credit Card ကိုသံလိုက် Stripe ဟာ Mini ကို Reader ကို
သံလိုက် Stripe ဟာကတ် Reader ကို, သာဖတ်ရန်
ultra-သေးငယ်တဲ့သံလိုက် Stripe ဟာကတ်မှာ Data Collector, Mini ကိုသံလိုက် Stripe ဟာကတ်မှာ Data Collection ကို Module
NFC ကိုထုတ်ကုန်များ (19)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (71)
သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ Tag ကို / ဘိလပ်မြေ Tag ကို (6)
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (25)